Ku Dhawaad 40 Ruux Oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Qarax Ka Dhacay Caasimadda Dalka Cuba. – Somalimirror.net
Qarax culus oo geestay khasaaroohin kala duwan ayaa caawa fiidkii ka dhacay gudaha hoteel ku yaalla bartamaha magaalada Havana ee caasimadda dalka Cuba, sida ay ku warantay warbaahinta wadankaas.
Ugu yaraan 8 ruux ayaa ku dhimatay qaraxa halka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 30 kale sida ay ku dhawaaqday madaxtooyada dalka Cuba. “Illaa hadda, 8 qof ayaa dhimatay, ku dhawaad 30 kalena waxaa loo qaaday goobaha caafimaadka” ayaa lagu yiri war rasmi ah oo kasoo baxay madaxtooyada dalkaas.
Warka kasoo baxay madaxtooyada Cuba ayaa sidoo kale lagu sheegay inay wali socdaan howlo lagu baadigoobayo dad kale oo laga cabsi qabo inay ku xayiran yihiin burburka hoostiisa.
Sida ay sheegeen masuuliyiin dowladda dalkaas qaraxa oo ka dhashay gaaska cunyada lagu karsado ayaa burbur xoogg leh u geestay hotelka oo ku yaalla afaafka hore ee dhismaha xarunta Capitol ee caasimadda dalka Cuba.
Qaraxa ayaa sidoo kale burburiyay gaawaari dhowr ah oo yaallay afaafka hore ee hotelka, waxaana muuqaallo iyo Sawirro laga soo qaaday goobta ay muujinayeen heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay qaraxa iyo burbur xooggan oo soo gaaray dhismaha hotelkaan oo lagu magacaabo Saratoga.
Previous PostAskar ka tirsan dowladda federaalka oo qarax lagula eegtay Ceelasha biyaha
Next PostCiidamo Itoobiyaan ah oo la kulmay weerar jidgal ah.